Indlela inhloli A Cell Phone Of Daughter My ?
On: Oct 07Author: adminIzigaba: Android, Cell Ucingo Spy, Cell Ucingo Tracking, Employee Ukuqapha, Faka Hambayo Spy, IPHONE, iPhone ngeti-5 kuya Spy Software, Hambayo Ucingo Ukuqapha, Spy Mobile, Ehambayo Spy Online, Gada Inthanethi Sebenzisa, Control Zomzali, Spy Facebook Messenger, Spy For Android, Spy For iPhone, Spy iMessage, hlola Hambayo ze-smartphone, Inhloli Izingcingo, Inhloli SMS, Spy Skype, Spy Viber, Spy WhatsApp, Track GPS Indawo Ayikho Amazwana
Indlela inhloli A Cell Phone
Ngingayilawula Kanjani inhloli Indodakazi yami Cell Phone?
Ukhona wangibhalela elinye ilanga ngibuza ukuthi ngingaxhumana kanjani bona lungangamela cell phone indodakazi yabo. Yena esakhula futhi umzali ikhathazekile ukuthi wayekade ukuthumela nokwamukela imilayezo akwemukeleki nezithombe. Ngithathe ngokuvamile ukuthola imeyili kubazali ethintekayo ngengane yabo noma teen-intanethi noma kwi "phone" inhlalakahle. Nakuba abaningi babengeke babe ezikhuthaza lokho ngokuyinhloko asihlola izingane zabo, ekupheleni kosuku, njengoba abazali kudingeka ukulawula ukuziphatha kwabo futhi kuba phansi kithi ukuqinisekisa inhlalakahle yabo. Uma lokhu kuhlanganisa nokuqapha ifoni yabo izingcingo noma imiyalezo, ngempela, lutho ukuze ziphinde zithole kuze online ngokusebenzisa amafoni abo, ke makube njalo.
Kunezindlela eziningana intanethi kuyokusiza ukuba iqaphe umakhalekhukhwini ngasese futhi kukunikeza ukungena kokukude zonke izinhlobo idatha ukuthi ifoni ingase iqukathe. Ngale ndlela ungakwazi ukugcina amathebhu uhlobo olunjani imeyili wona ukuthumela nokwamukela inthanethi nge amafoni abo. Ungabona yonke imiyalezo ye-SMS ngocansi futhi wathola. Ungabona ngisho izithombe izithombe ukuthi kokuba kwabelwane futhi surfing internet umlando.
Indlela inhloli A Cell Phone – Izinzuzo Cell Monitoring Software
Mhlawumbe omunye izici ezinamandla kakhulu ukuthi lolu hlobo software has yikhono ukulalela ucingo baphile - njengoba kwenzeka. Ubuhle izici software eziyisisekelo ezifana nokuqapha wombhalo ukuthi uyobe bakwazi ngisho bheka them uma they basusiwe. Enye inzuzo isofthiwe ukuthi nokufakiwe uqobo ngokujulile ngasese singene smart phone ukuthi akunakwenzeka umsebenzisi ukutshela ukuthi kukhona. Ngakho uma ungumuntu umama ukhathazekile noma ubaba, ethintekayo ukuthi indodakazi yakho uziphatha ngendlela engafanele noma ukuthi bathola imilayezo akwemukeleki, mhlawumbe kusukela umfana noma omunye abadala ukuthi ongayethembi - lolu hlobo software kuyokusiza ukuba ubone iqiniso ngemuva kwenzakalani ngaphandle ngisho ixwayisa kubo yokuthi ubulokhu nokuqapha kubo. Kukhona ngisho isici kokulandela lapho ungabona lapho ifoni (futhi kungakho indodakazi yakho) kuba ngaso sonke isikhathi ukuthi ifoni esitshalweni. Kanye izinzuzo ngenhla isofthiwe ikuvumela ukuba ubone ushayele umlando, isikhathi on call, Yena wabiza futhi ngubani ifoni iye yasetshenziswa ukubiza. Uma izinombolo ukufanisa amagama ohlwini loxhumana nabo yefoni, nawe futhi bayokwazi ukubona labo amagama.
Indlela inhloli imiyalezo
Indlela inhloli A Cell Phone – Ukufaka Monitoring Software on Yengane Yenu Cell Phone
Kukhona catch kancane, Nokho. Udinga ukwazi ukulanda isofthiwe efonini kwasekuqaleni. Manje abazali abaningi bangavumelana umane utshele ingane ukuthi abakwenzayo lokhu futhi ngeke kube inkinga. Well, Mhlawumbe kuyoba, kodwa lokho kungumsebenzi wakho. Kwezinye izimo ikakhulukazi intsha abadala lokhu kungase kube isiphakamiso trickier futhi ungase ufune ukufaka isofthiwe ngasese.
Uma kulandelwa lezi ziyalezo lokusebenza ukuqapha ngeke kusabonakala kuphi ifoni ukuze indodakazi yakho ngeke nakwazi ukuthi ungakwazi neso lakhe. Kubalulekile ukuba wazi ukuthi uma ucelwa for the ukhiye welayisensi, uyobe Ngitholile lokhu ngaphambili uma ubhalisele yokukhokhela isofthiwe!
Ngakho, usukhokhe for the software (Checkout Isaphulelo yami links kuleli khasi!) futhi une ukhiye wakho ilayisensi futhi ozifakile lokusebenza efonini target. Yini manje?
Indlela inhloli A Cell Phone – Ukusebenzisa Cell ukuhlola Software ukuba Gada Izingcingo Indodakazi yakho
Uma uye wasenzela zonke izinyathelo ezingenhla, Manje ungakwazi ukungena indawo ephephile yangasese ukuthi umenzi fanele hlinzeka for you online, usebenzisa imeyili nephasiwedi enikeziwe uma ikhokhelwe software. Uzoba ukufinyelela yonke imininingwane okudlula ifoni (ngisho konke lokho Ufika kusulwe kweso!).
Manje abe ikhambi kanjani ukuqapha cell phone indodakazi yakho futhi kuyoba ukhokhe mayelana $15.99 ngoba lokusebenza. Njengoba ukubuyekezwa ezingenakubalwa isofthiwe show - lokhu kuwufanele imali ukuthula kwengqondo noma isidingo ukuya phansi udaba trust noma inkinga nendodakazi yakho. Nakuba $50 ubonakala esikhulu ucele efika kuqala, uzothola ukuthi lo software cishe online abathembeke kakhulu futhi udinga ukuba ugweme esibhekene izingosi ezonikeza software ukuthi noma kungasebenzi noma kuyokulahlekisela nengalo umlenze izitolimende zenyanga.
Into ngalokhu software ethile wukuthi kwamakhasimende kuyinto enhle, futhi izindlela zokukhokha Ziningi futhi zihlukahlukene. Godu, uma abayitholayo ukuthi software ayisebenzi kahle indlela babelindele yona, ungathola imali egcwele nhlobo ukuphikisana. Lona brand omethembayo kakhulu online futhi izici ukuthi uthola ngentengo encane abanjalo bangabaphostoli Amazing. Lokhu ngokoqobo njengokungathi kokuba umphenyi zokusebenza ubusuku nemini. Cabanga imali kangakanani ezaziyophela up kubiza wena! Thola iqiniso namuhla ukukukhulula at ukuphumula, ekugcineni.
You Can Download: Indlela inhloli A Cell Phone Of Daughter My ?
Indlela inhloli A Cell Phone, How to spy on a cell phone for free download, How to spy on a cell phone without having it, How to spy on a cell phone without installing software, How to spy on a iphone, Indlela inhloli imiyalezo, How to spy on your spouse